Mareykan Oo Soo Farageliyay Dacwad Ka Socoto Dalka Canada Oo Daaha Ka Qaadeysa Shaqo Sirdoon Oo Xasaasi Ah Oo Uu Qabtay Dhaxal-suge Maxamed Binu Salmaan – somalilandtoday.com
Mareykan Oo Soo Farageliyay Dacwad Ka Socoto Dalka Canada Oo Daaha Ka Qaadeysa Shaqo Sirdoon Oo Xasaasi Ah Oo Uu Qabtay Dhaxal-suge Maxamed Binu Salmaan
(SLT-Ottawa)-Saraakiil Mareykan ah ayaa soo farageliyay dacwad ka socoto Canada oo uu ku lug leeyahay Madaxii hore ee Sirdoonka Sacuudiga Sacad Al-Jaabiri, taasi oo daaha ka qaadeysa shaqo sirdoon oo xasaasi ah oo qarsoon.
Sacad Al-Jaabiri, Madaxii hore ee Sirdoonka oo loo masaafuriyay Canada, waxaa ka dhashay khilaaf soo kala dhexgalay Amiirkii hore ee xilka dhaxal-sug ee Sacuudiga laga qaaday Mohammed bin Nayef (MBN) iyo Dhaxal-sugaha kala wareegay ee Amiir Mohammed bin Salman (MBS).
Al-Jaabiri oo muddo fog wax ka ogaa howlgalka Wadajirka ah Sacuudiga & Mareykanka ee “La dagaalanka Argagixisada,” ayaa sanadkii tagay ku andacooday in Amiirka Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan uu u qorsheeyay shirqool dil ah, halka uu xiray labo carruur ah oo uu dhalay.
Al-Jaabiri ayaa ku lug lahaa howlaha qarsoon ee Maxamed Bin Salmaan. Saaxiibkii hore, Amiir Maxamed Bin Naif, oo uu ula shaqeyn jiray ayaa xabsi guri ku jira, kadib markii laga qaaday Dhaxal Sugenimada 2017-kii waliba si afgambi ah.
Sacad Al-Jaabiri waxa uu kaalin weyn ka qaatay howlgaladii uu dhaxal-suge Maxamed Bin Salmaan ku beegsaday dad maalqabeeno ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan qoyska Boqortooyadooda.
Qoraal uu diyaariyay Qareenka Al-Jaabiri oo ay aragtay Wakaaladda Wararka AFP ayaa waaxda Cadaaladda Mareykanka waxay ku codsatay “dib u dhigista dhammaan gal dacwadeedyada” maxkamadda Ontario ilaa 30-ka September si Washington ay u hesho waqti ay uga fakirto tallaabooyinka lagu ilaalinayo danaheeda.
“Xidhiidhka Arrimaha Dibadda iyo Amniga qaranka Mareykanka waxa ay u baahan yihiin in la dabciyo marna la adkeeyo,” Sidaasi waxaa qoraal ku taariikheysan 29-kii June ku yidhi Qareenka Dowladda Malcolm Ruby.
Inkasta oo ay Washington in aysan “wax Mowqif ah ka laheyn kiiska” haddana waxa ay ka welwelsan tahay “Ilaalinta macluumaadka Amniga Qaranka,” ayuu qoraalkiisa sii raaciyay Malcolm Ruby Qareenka Dowladda.
Warqad loo dusiyay (Lala wadaagay) Elizabeth Ricards oo ah La taliye ka tirsan waaxda Cadaaladda Canada ayaa Mareykanka loosoo jeediyay in uu si hoose ula shaqeeyo dhiggooda Canada “Si Xushamad leh”.
Richards iyo qareenka Al-Jaabiri kama aysan jawaabin codsiga AFP, Halka Ruby uu qoraalka AFP u weeciyay waaxda Cadaaladda Mareykanka oo iyanna dhankeeda diiday in ay jawaab ka bixiso arrintaan.
Qoraalka Ruby ayaa lagu sheegay in soo gudbinta difaaca Al-Jaabiri ay si toos ah u kicin doonto qodobbada hoos yimaada “qaybta 38 ee Sharciga Caddaynta Canada”, taas oo ku qasbi doonta qareennadiisa in ay dib u saxaan macluumaadka xasaasiga ah.
Xeer-dheerayaasha ayaa sheegay in sharciga qodobkaan xasaasiga ah shaacinta macluumaadka iyo xogaha ku jira ee xasaasiga ah ay u baahan doonto in la helo fasax (Ogolaansho) laga helo qareenka guud ee Canada ama Mid maxkamadeed.
“Maxkamadaha Canada waligood ma aanay arag wax lamid ah tan,” ayuu yiri garyaqaan fadhigiisu yahay Magaalada Toronto oo codsaday in aan magaciisa la adeegsan. “Halka qodobka 38 uu si KMG ah uga hortagayo gudbinta macluumaadka amniga qaranka Mareykanka haddana Dr Al-Jaabiri waxa ay kahor joogsaneysaa in uu adeegsado caddeymo udub dhexaad u ah difaaciisa,” ayuu Qareenka u sheegay AFP.
Dacwadaha waxaa iska leh shirkado badan, oo ay ku jirto Sakab Saudi Holding, kuwaas oo xareynaya galdacweedka aasaaska Amiir Maxamed Bin Salman waxaana ay qayb ka ahaayeen shirkado isku xiran oo gabbaad looga dhigtay howlgalka la dagaalanka “Argagixisada” Sacuudiga iyo Mareyianka.
Bishii March, Sakab waxa ay Al-Jaabiri ku eedeysay in uu lunsaday $3.47 Bilyan oo dollar, isaga oo ka shaqeynayay Wasaaradda arrimaha Gudaha Sacuudiga. Maxkamadda Massachusetts waxa ay Boston ku wargelisay in ay xayirto $29 Milyan oo dollar oo lacagiisa ah.
Tani waxa ay timid kamid markii shirkado badan oo Sacuudiga laga leeyahay oo ay kamid tahay Sakab ay Canada ka dalbatay in ay xayirto sidaas oo kale si loo joojiyo dhaqdhaqaaqa hantidiisa taalla Dalkaas.
Si loo caddeeyo in uusan dambi lahayn, Al-Jaabiri wuxuu leeyahay maxkamaduhu waxa ay u baahan doonaan in ay baaraan dhaqaalaha Shirkadda Sakab oo ay kamid tahay sida loo isticmaalay maalgelinta barnaamijyada howlgallada CIA, Hay’adda Amniga Qaranka ee Mareykanka iyo Waaxda Difaaca Dalkaas.
Murankaan ayaa khilaaf ka dhex geliyay xubnaha boqortooyada dhexdooda, waxaana uu gaaray in la xiro shaqsiyaadka qaar, Sacad Al-Jaabiri waxa uu sanooyin badan aad ugu dhawaa dhaxal-sugihii hore Maxamed Bin Nayef oo lagu ammaano in uu ka adkaaday Al-Qaacida sanadkii 2000.
Sidoo kale waxa uu Aljaabiri udub dhexaad uu ahaa Xidhiidhka Sacuudiga uu la yeeshay Sirdoonka Dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Canada, Austarlia & New Zealand, waana tan keentay in baacsigiisa uu bato in xogta uu hayo loo af qabto.